Haisi yezvinhu zvebonde chete: zvemufaro wevanhu vaviri, tanga nebhora rekudzikira Yin
1. Pelvic pasi kusagadzikana Vakadzi pelvic floor kudzvinyirira kunowanzoitika mumadzimai epakati nepakati nevakwegura vakazvara. Nekuda kwezvakasiyana zvikonzero zvepelvic pasi kusagadzikana, zviratidzo zvakasiyana, kusanganisira weti nzira yekutsamwiswa zviratidzo, senge kugara uchiita weti, kukurumidza kwe ...
Ungasarudza sei vibrator yakakodzera
Chikamu chinosimudzira chakakosha Senge nenzeve dzakatwasuka, kana nekona yakapinza, hazvidiwe! Iye zvino maumbirwo akajairika pamusika ndeaya mapuruvhuru, nyuchi diki, tsuro diki zvichingodaro, uye mamwe maumbirwo eano novel maruva chimiro, fan fan uye zvichingodaro. Maumbirwo aunosarudza zvinoenderana ne ...
Mashandisiro uye nekuchengetedza vibrator yevakadzi bonhora
Nzira yekushandisa Iyo vibrator, inozivikanwawo senge inodzosera tambo yemabasa mazhinji, yakagadzirirwa kutevedzera kudhonza uye kuisa chiito chechirume Yinjing. Mutumbi unodedera unogona kudzoreredzwa mukati me 1-3cm, uye masitayera akasiyana anosanganisa mabasa akasiyana siyana seanosimudzira vulva, kusvetuka kwezai, bead turn ...